दुःखद खबर - Candles Khabar
जे. पी. प्रतिष्ठानका संस्थापक, सामाजिक अभियन्ता तथा प्रजातन्त्रवादी नेता मित्रसेन दाहालको असामयिक निधनले मलाई अति दुःख लागेको छ । उहाँ राष्ट्रप्रेमी तथा दूरदर्शी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँले लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको महाभेला र छलफल कार्यक्रम गराएर लोकतन्त्रप्रति अगाध निष्ठा प्रकट गर्नु भएको छ । उहाँले मार्तण्ड कोटी हवन तथा महापुराणहरूको अनुष्ठान गरेर अभूतपूर्व आध्यात्मिक साधना गर्नु भएको थियो।
उहाँले २०७६ साल फागुन महिनामा लप्सीफेदी, शंखरापुर नगरपालिकामा आयोजना गर्नु भएको अनुष्ठान सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले अभूतपूर्व हुन पुगेको थियो। महायज्ञ सुचारु भइरहेकै बेला देशका अनेक जिल्लाबाट लेखक, कवि, साहित्यकार, समालोचकहरूलाई आमन्त्रण गरी बौद्धिक अन्तर्क्रिया गराउनु हुने उहाँ नेपाली साहित्यको इतिहासमा अमर बन्नु भएको छ । दुई दिने यस अधिवेशनमा भाग लिने अवसर पाउँदा म अत्यन्तै गौरवान्वित भएको छु।
मित्रसेन दाहालको सिर्जनशीलता र कर्मचेतना अद्वितीय छ । लप्सीफेदी जस्तो पहाडी दुर्गम स्थानमा त्यति धेरै जग्गा प्राप्त गरी यज्ञशाला, धर्मशाला, गौशाला, अतिथिगृह, सभाहल, अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन क्षेत्रहरूको व्यवस्था गर्न सक्ने मित्रसेन दाहालको क्षमता असामान्य देखिन्छ । प्रकृतिको त्यस्तो सुन्दर र एकान्त तपोभूमिमा पुग्दा जुनसुकै व्यक्तिको मन शान्त तथा आनन्दित बन्न पुग्दछ । अझ कवि, लेखक र कल्पनाशील व्यक्तिहरूका निमित्त त सो स्थान सिर्जनाको उर्वरभूमि नै मानिन्छ । कला साधकहरूका लागि त जेपी प्रतिष्ठान तूलिकाभूमि नै ठहर्छ । त्यस्तो सुन्दर, खुल्ला र अति रमणीय स्थानमा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न सक्ने मित्रसेन दाहाल स्वयम् एकजना तपस्वी हुनुहुन्थ्यो । परोपकारी भावना भएका दाहाललाई त्यागी सन्त तथा महात्मा सरह मान्न सकिन्छ । उहाँमा रहेका सात्विकवृत्ति, सेवाभाव तथा मानवताप्रेम अनुपम देखिन्छन् । उहाँले जीवनलाई ऋषितुल्य बनाई मुनिवृत्ति धारण गर्नु भएको पाइन्थ्यो । सबैलाई माया, प्रेम र सद्भाव दिन सक्ने उहाँमा अलौकिक दिव्यता झल्किन्थ्यो । मृदुभाषी तथा विनम्र स्वभाव भएका मित्रसेन दाहाल नेपालमाताका सुयोग्य सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्ना कार्यहरूबाट नै मुलुकलाई स्थायी रूपमा शुभसन्देश दिइरहनु हुनेछ । उहाँको अवशानबाट हामीले एकजना राष्ट्रभक्त, दिव्यचिन्तक तथा मानवात्मालाई गुमाएका छौँ । उहाँ हाम्रा हृदयमा सधैँ बसिरहनु हुनेछ भन्ने आकाङ्क्षाका साथ सादर सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
अन्त्यमा वैकुण्ठधामको यात्रामा जानु हुने मित्र मित्रसेन दाहालज्यूमा श्रद्धासुमन अर्पण गरेर बिदा हुन्छु। जय नेपाल, ॐ शान्तिः।
प्रकाशित समय ०८:५० बजे
पछिल्लाे - एन्फा र गङ्गालाल अस्पतालबीच सम्झौता
अघिल्लाे - सुत्केरीलाई तेल, कुखरा र न्यानो कपडा